Ukumaketha kwe-hax? Amabhodi we-Ivar's Undersea
ULwesine, April 18, 2013 ULwesithathu, April 17, 2013 UMathewu Schmoldt
Isikhathi sokufunda: 3 imizuzu Ngokuya nge-YouTube, amahora angama-72 evidiyo alayishwa njalo ngeminithi! Abasebenzisi be-Twitter bathumela ama-tweet izikhathi ezingama-400 ngezigidi ngosuku. Ezweni eligcwele umsindo, kunzima ukuthi umkhiqizo, iwebhusayithi, noma insizakalo izwakale. Kuba nzima nakakhulu uma kungekho lutho oluhlukile ngempela ngento emakethwayo. Nsuku zonke, abathengisi babhekana nenselelo yokwenyuka ngomsindo. Ngethemba lokuvuselelwa kokudala, ngiphendukela ku-2009